Dhagayso: DFS “Duqayntii Gedo waxaan ku dilnay Maleeshiyaad iyo saraakiil katirsan Alshabaab”. | Dhagayso: DFS “Duqayntii Gedo waxaan ku dilnay Maleeshiyaad iyo saraakiil katirsan Alshabaab”. – Latest News
« Ciidamada Kenya oo Caawa faarujiyay Deegaano katirsan Jubbooyinka…
Qarax Sababay Dhimashada Sargaal ka tirsan Nabad sugidda oo Caawa ka dhacay… »
Dhagayso: DFS “Duqayntii Gedo waxaan ku dilnay Maleeshiyaad iyo saraakiil katirsan Alshabaab”.
Diyaaradaha Dagaalka ee Dalka Kenya ayaa waxay Duqayn Xoogan ka gaysteen Deegaano ka tirsan Gobolka Gedo Gaar ahaan Duleedka Degmada Baldxaawo waxaana Duqayntaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo soo gaaray Dad shacab ah iyo Dagaalamayaal katirsan Alshabaab.
Cali Cabdi Cabdi waa Gudoomiyaha Degmada Ceelcadde waxa uu xog badan ka hayaan Duqaynta waxa uu sheegay in duqaynta aysan shacab wax ku noqon balse ay ku dileen saraakiil muhiim u ah alshabaab oo ku sugnaa Miyigi Degmada Baladxaawo.
Masuulkaan katirsan Dowladda sheegay in duqaybta ay si wada jir ah ufuliyeen Ciidamada Dowladda iyo kuwa Kenya islamarkaana bartilmaameedka uu ahaa Saraakiil iyo Maleeshiyaad Alshabaab ah oo ku sugnaa Deegaanada la duqeeyay.
HALKAAN KA DHAGAYSO WARAYSIGA: